Wararka Maanta: Isniin, Aug 6 , 2018-Puntland " Ma ogalaneyno in lugu xadgudubo dadka qaxootiga ah"
Sarkaal ka tirsan wasaaradda oo la hadlay warbaahinta gudaha, ayaa sheegay inay meel adag ka taagan-tahay siyaasadda Puntland dhibaato in loo geysto dadka maganta u ah, wuxuuna inta ku daray in la bunbuuniyay dhacdada ka dhacday magaalada Boosaaso.
" Puntland ma ogalaneynso in la dhibaateeyo dadka qaxootiga ah." ayuu yiri Burhaan Huurse Xaashi oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha " Ma jirto wax dhibaato ah oo la soo garsiiyay wasaaradda, balse waxaa jirta dhacdo la buunbuuniyay oo ah nin Oromo ah oo lugu bugabugeeyay Boosaaso." ayuu raaciyay hadalkiisa.
Xaashi , ayaa sheegay in la qaadayo tallaabooyin looga hortagayo in la dhibaateeyo dadka ka soo jeedda qowmiyada Oromada ee qaxootiga ku ah Puntland, wuxuuna yiri " Puntland horey ayay u sheegtay marna ma aqbaleyno xiisada ka taagan Itoobiya in ay saameyn ku yeelato dadka halkan nala jooga."